DARYEELKA GURIGA KA DIB MARKA AAD IIBSATO FOORMAAN FAARIS AH IYO NOOCYO KALE OO UBAX AH: XEERARKA ILAALINTA, GOORTA IYO SIDA LOO SOO CELIYO? - SOOSAARKA DALAGGA
Sidee loo burburin karaa ubax ka dib iibsashada: Daryeelka guriga ee Faaris iyo noocyada kale ee cyclamens
Soo jiidashada baaskiilada ayaa soo jiidata dareenka labada jimicsi iyo kuwa bilowga ah ee ganacsigan. Si kastaba ha noqotee, kuwa iyo kuwa kaleba waxay la kulmaan dhibaatooyin gaar ah, oo go'aansada inay iibsadaan ubax aan caadi ahayn.
Suurtagal ma tahay in laga fogaado dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka? Haa, haddii aad si taxadar leh u barato xeerarka daryeelka oo raac si sax ah. Maantana waxaan kuu sheegi doonaa wixii aad ku samayn lahayd baaskiilka kadib marka aad gadato. markaad u baahan tahay inaad soo celiso ubaxa iyo sida loo sameeyo. Waxaan sidoo kale ku talineynaa in aan daawano fiidiyoow ku saabsan mawduucan.
Xeerarka xulashada ubaxa
Si aan loogu niyad jabin iibsashada, iibsadaha ayaa u baahan doona kormeer dhow oo ka mid ah warshadda la soo xulay. Nuqullada leh caleemo qallalan iyo waxyeello waa in laga fogaadaa. Haddii ay jirto weerar caleenta ama qaybaha kale ee dhirta, waxa fiican in laga tago iibka - waxay u egtahay in baaskiiladu ay dhiman doonaan iyo xitaa infekshannada kale ee gudaha. Burburka laftiisa waa inuu ahaadaa cufan, cufan, leh xoog leh afkoda.
Inta lagu jiro xilliga ubaxa firfircooni waxay doorbidaan kiciyo leh tiro badan oo ah burooyinkeeda. Geeddi noocan oo kale ah ayaa ku farxi doona milkiilaha oo uu udhaqaaqi doono muddo ka badan kuwa kale.
Waa muhiim: Waqtiga ugu fiicnaanta iibinta cyclamen waa dayrta, marka geedka aan weli bilaabin inuu ubaxdo.
Sidoo kale, taasi waxay u baahan tahay dareen dhow - nodules. Waa inay u ekaadaan kuwo caafimaad qaba kuna fariistaan ​​carrada. Mararka qaarkood waxaan ka hadleynaa ku iibinta oo kaliya tuber ubax ah oo sii kordhaya, oo aan ahayn baaskiil la koray. Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato kelyaha koritaanka - waa inay noqotaa mid waxtar leh - iyo maqnaashaha guud ahaan. Tuber caafimaad leh ayaa u muuqda mid cufan, culus.
Waxaan ku talineynaa inaan daawano fiidiyowga ku saabsan sida loo doorto bacda saxda ah ee dukaanka:
Daryeelka inta lagu jiro mudada la qabsashada
Baaskiiladuhu waa kuwo furfuran oo si xoogan u falceliya isbedelka deganaanshaha.. Sidaa darteed, ma ahan wax la yaab leh in muddo gaaban dhirta ay iman doonaan nolosha kadib iibsashada.
Ubaxa wuxuu u ekaan karaa wax yar oo la jarjaray, cawska ubaxa iyo petioles hoos u dhaco, laakiin tani waa nidaam ku habboon. Iyada oo daryeel ku haboon ka dib iibinta cyclamen (Fiiri iyo noocyo kale oo kala duwan) guriga dhexdiisa ayaa si deg deg ah ugu laaban doona gobolka hore.
Si loo fududeeyo walwalka bedelaadaha, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in dhammaan shuruudaha aasaasiga ah ee lagu hayo ubax la daboolay. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, waxaad ku tashan kartaa inaad ku buufiso ama waraabiyo. Intaa waxaa dheer, Baaskiilada la iibsaday waxay u baahan yihiin isu tallaalida, mararka qaarkood isla markiiba ka iibsashada.
Maxaa la sameeyaa marka hore?
First of dhan, waxaad u baahan tahay mar kale kormeerka geedka. Dukaanka, si fudud ayaad u seegi kartaa tan ama cilladda, iyo ubaxa jilicsan mar walba ma dulqaado gaadiidka. Haddii, inta lagu jiro nidaamka kormeerka, caleemaha waxyeelay ayaa la helay, waa in si taxadar leh looga saaraa, isla sidaas waxaa lagu sameeyaa peduncles ubax.
Waxaa muhiim ah in la xusuusto in dhammaan dhibaatooyinka aan la arki karin indhaha qaawan. Cayayaanka waa la qarin karaa dhulka. Si looga fogaado wasakheynta dhirta kale ee gudaha, baclinta waxay u baahan tahay inay hesho meel gaar ah toddobaad ama laba. Intaa waxaa dheer, ubaxa ma waxyeeleynayo ka hortagga ka hortagga.
Goorma ayaa lagamaarmaan ah in loo baahdo?
Xaaladaha marka barafka waa in la beddelo:
Dheriga "nadiifka ah" ee baaskiilada ayaa aad u yar yar ee warshadda wuxuuna caqabad ku noqonayaa horumarinta nidaamka xididka.
Boqolkiiba boqol oo bacriminta ah ee ciidda gaadiidka ayaan waxtar u lahayn ubaxa.
Marka transplanted ee ciidda waxaa inta badan laga helaa dirxiga ee cayayaanka.
Mulkiiluhu wuxuu go'aansadaa marka uu soo celiyo ubaxa - isla markiiba ka iibsashada ama waqti ka dib. Haddii dhirta la iibsado xaalad ubax ah, waxaa wanaagsan in dib loo dhigo qaliinka ilaa dhamaadka muddada nasashada.
Cyclamen waxay u baahan tahay in lagu bedelo ka hor inta muuqaalka cusub ee burooyinkeeda cusub. Waxa ugu fiican ee la sameeyo waa xagaaga hore.
Waxaa jira xeerar dhowr ah oo ku saabsan sida loo baadho wareegga dhiigga. Nidaamkani wuxuu ku lug leeyahay dhowr talaabo:
Xulashada dufanka. Dheriga waa inuu ka yaryahay mid ka mid ah kan hore oo leh godad dheeri ah si looga fogaado lakabaadda digriiga.
Diyaarinta ciidda. Labadaba waxaa laga iibsan karaa dukaanka khaaska ah, iskuna kariya naftaada. Xaaladda labaad, carrada cawska ah iyo kuwa adag, humus iyo caano isku dhafan ayaa loo baahan yahay. Intaa waxaa dheer, waxaad u gubi kartaa ciidda sidaa darteedna jeermiska u nadiifin kara.
Si toos ah ayaa loo bedelaa. Cyclamen waa in si taxadar leh looga saaraa dheriga iyo, haddii ay suurtagal tahay, nadiifi tuber ka soo ciidda, qaar ka mid ah growers xitaa lagu taliyey in ay maydhaan. Ka hor inta aan la sameynin xubin ku-tallaalid, tuberiyuhu waa in la baaro oo qudha. Haddii meelaha la gooyey weli la helayo, waa la gooyaa, goobaha dillaacana waxaa lagu daboolaa dhuxul la jajabiyey. Ka dib markii taas, isku dar ah ciidda la dhammeeyaa waxaa lagu daadin karaa dheri, ka dibna geedka laftiisa ayaa la gelin karaa.
Guddi: Looma baahna in si qoto dheer loo xoojiyo tuberka. Waa ku filan inaad ku rusheeyso dhulka saddex meelood laba meel.
Maalmaha ugu horeeya ee loo yaqaan 'transplantation', baclinta waxaa laga yaabaa in ay u muuqato in la eego, laakiin taasi waa caadi. Haddii si sax ah loo sameeyo, ubaxu si degdeg ah ayuu u imaan doonaa dareenkiisa.
Waxaan kugula talineynaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan wareegga wareegga wareegga kadib markaad iibsato:
Si loo boodboodo si aad u heshid isha waqti dheer, milkiilaha ayaa looga baahan doonaa inuu raaco xeerar dhawr ah oo khasab ah oo lagu daryeelayo warshad guriga ku jirta:
Waraabinta. Xaalad la'aantu waa in duufaannada la shubo. Waxaa fiican in laga dhigo waraabinta digsiga, sidaa darteed qoyaanku kuma dhaco rosette. Haddii kale, geedka wuxuu bilaabaa inuu qudhmo. Waxaa macquul ah in biyaha ubaxa biyaha la kala soocayo heerkulka qolka.
Heerkulka. Cyclamen uma dulqaadan karo kuleylka, markaa heerkulka ugu fiican waa 13-16 digrii.
Qoyaan. Ubaxa ma jeclaanayo labada qoyaan badan iyo hawo qallalan. Waxaa ugu wanaagsan in la siiyo isaga oo leh dhexdhexaad ah.
Dharka ugu sareeya. 2 ilaa 5 bilood laga bilaabo taariikhda iibsashada ee ciidda waa in aan la bacrimiyo. Dharka ugu sareeya waxaa la sameeyaa inta lagu jiro xilli firfircoon ee dhirta. Waxaa muhiim ah in aanad ka badnayn bacriminta, haddii kale dhirta lama duubi karo (waxaad baran doontaa sababta baaskiil aan loo beerin iyo sida loo saxayo).
Gooyo. Caleemaha la qalajiyey iyo waxyeelo iyo cagaarka waa in si dhakhso ah looga saaraa.
Nalalka. Cyclamen waxay u baahan tahay iftiin badan. Xilliga jiilaalka, waxay ku haboonaan doontaa daaqada koonfurta, xagaaga, galbeedka ama bariga. Xilliga qaboobaha, waa inaadan dhigin geedka meel u dhow ilaha kuleylka.
Inta lagu jiro xilliga nasashada, waxaa lagama maarmaan ah in si tartiib ah loo yareeyo waraabinta iyo joojinta bacriminta. Dhirta lafteeda way ka fiican tahay inay u guurto qolka qaboojinta.
Waxaan kugula talineynaa daawashada fiidiyowga ku saabsan daryeelka duufaanku:
Inkastoo xaqiiqda ah Cyclamen - ma ahan midka ugu sahlan ee ubaxa lagu hayo, iyada oo daryeel ku haboon, sii kordhaya guriga ma keeni doonto dhibaato badan. Waa inaad ku dadaashaa inaad ku socotid qaynuunnada oo dhan, oo kii sannaddaba sannaddiisa badan oo daamanka ahuna wuu kufiqi doonaa.